कोरोना भाइरसले मस्तिष्कमा पनि पार्न सक्छ नराम्रो प्रभाव ! - कोरोना भाइरसले मस्तिष्कमा पनि पार्न सक्छ नराम्रो प्रभाव ! -
कोरोना भाइरसले मस्तिष्कमा पनि पार्न सक्छ नराम्रो प्रभाव !
काठमाण्डौ । कोभिड-१९ बिरामीहरूमा गरिएको ८० भन्दा बढी अध्ययनहरूले एक तिहाइको मस्तिष्कको अघिल्लो भागमा केही जटिलता देखायो। यस अध्ययनले स्नायु प्रणालीमा रोगको प्रभावमा प्रकाश पार्छ।
अध्ययन प्रतिवेदन ‘सीजर: यूरोपियन जर्नल अफ एपिलेप्सीमा प्रकाशित भयो, जुन ईईजी मार्फत मस्तिष्कमा असामान्यताहरू पत्ता लगाउन केन्द्रित छ । “हामीले यस तरीकाले प्रभावित भएका ६ सय भन्दा बढी बिरामीहरू भेट्टायौं,” अमेरिकाको बेल्लोर कलेज अफ मेडिसिनका स्नायु प्रणाली विज्ञानका सहायक प्राध्यापक जुल्फी हनीफले भने। जब हामीले यसलाई सानो समूहमा देख्यौं, हामी यो निश्चित थिएनौं कि यो संयोग हो कि केहि हो, तर अब हामी निर्धक्कसँग भन्न सक्छौं कि यसको केही सम्बन्ध छ।
अन्वेषकहरूले भने कि अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरूको दिमागको अघिल्लो भागमा विकृति देखियो। उनले भने कि कोविड १ patients बिरामीहरूको ईईजीबाट केही संकेत पाइएको छ कि मस्तिष्क हदसम्म बिगार्न सक्छ कि यो रोगबाट पुन: प्राप्ति भए पनि पुन: प्राप्त गर्न सकिदैन।
हनिफले भने, “हामीलाई थाहा छ भाइरस नाकबाट भित्र पस्ने सम्भावना रहेको छ, त्यसैले मस्तिष्कको भागको बीचमा सम्बन्ध रहेको देखिन्छ जुन प्रवेश बिन्दुको नजिक छ। उनले अझै एउटा कुरा भने। त्यस्तै प्रभावित व्यक्तिहरूको औसत उमेर ६१ बर्ष थियो र ती मध्ये एक तिहाइ महिला र दुई तिहाइ पुरुषहरू थिए।
यसले सुझाव दिन्छ कि कोरोना भाइरस सम्बन्धी मस्तिष्क असामान्यता बुढो पुरुषहरूमा सामान्य हुन सक्छ। यद्यपि वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि यस सम्बन्धमा अझ बढी अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।